The zuru okè Cheap Off Road Electric Self adịzi skuuta - Jomo Technology Co., Ltd
The nso bụ otu n'ime ndị dị oké mkpa echiche ma na-ahọpụta ihe electrically kwadoro ụgbọala. Self adịzi skuutan'ihi na ala-ọsọ ugbo ala, na niile tụnyere ahịa na ngwá ahịa yiri. Mepụtara Koowheel, na Hoverboard K7 na-patented dị ka a "na-wheel, onwe-guzozie ụgbọala.". Ma ma ọ bụ na ị na-coasting, ọduọ, ma ọ bụ n'ụzọ, Hoverboard K7 bụ mgbe niile na kwụsie ike. The Hoverboard K7 Self-adịzi skuuta 8.5inch hoverboard nnukwu wheel anya n'okporo ụzọ ahụ, ya mere na ị nwekwara ike na na na na ya dị ka nke ọma na elu na ala n'okporo ụzọ. Ọzọ Model K5 abụọ wheel onwe adịzi skuuta na sọrọ Bluetooth na smart mere ọkụ. The otu ihe dị iche na ị ga-ahụ n'etiti Segway na a ole na ole onwe adịzi osisi bụ na-anọghị nke handlebars, Ọzọkwa, 50% ibu n'akụkụ nke ọ bụla na-edebe ya na akpaaka itule tupu n'aka na mgbe uzo anya, na ihe ndị ọzọ mụ, mfe na mma na-agba ịnyịnya, karịsịa maka beginners. Right ebe a na Koowheel, ị ga-ahụ onye nke kasị mma nwete banyere onwe-guzozie scooters.
The Koowheel Hoverboard bụ otu zuru okè "Mere na China" onwe guzozie scooters. Ọ na-eme atụmatụ na a skuuta ga ikpeazụ ị a nke kacha nta nke 10 afọ, nke pụtara na ị ga-maa nweta ọtụtụ gị ego mgbe ọ bụla ị na-ahọrọ a onwe guzozie scooters. New abụọ wheel onwe guzozie electric skuuta . Nke a skuuta na-atụmatụ a n'akụkụ stabilization usoro bụghị a na ugbu a na dị iche iche scooters. Wezụga na a, o doro anya na skuuta nwere a eguzo n'elu ikpo okwu na ụkwụ abụọ na bụ isi mma na ụfọdụ na-eduga scooters. The 2 wheel adịzi skuuta 's ọkụ na-egbuke egbuke, na ị ga-enwe ike na-agba ọsọ a igwe na-adị mfe dị ka nke ọma. The ogologo ndụ batrị na na; ugboro abụọ Bluetooth ọkà okwu usoro na-eweta nke zuru okè Nchikota n'abalị oge o yiri ikenyeneke mbiet nwere nri njem, Ikanam ọkụ achasi n'okporo ámá, na-ege ntị music na-enwe na-zuru okè na ahụmahụ. E wezụga, na e nwere a handle n'etiti, nnọọ mfe eweta.
Nke a na ụdị onwe-guzozie skuuta , n'adịghị ka ndị ọzọ, nwere 8pcs ndọda sensọ, ọ bụghị mgbe nile 4pcs silicone gros, ihe mwute na ike, ala ntụpọ ọnụego. Anyị na-ama ama etinyere na patent na ọ bụ ndị na-abụghị ịda iwu na Chic, solowheel ma ọ bụ Aguba, dị nnọọ iche teknụzụ na anyị onwe anyị patent. Ọ bụrụ na ị na-a green-n'aka, họrọ 'mbido' larịị. The na taya na-inogide na ibu ọrụ, na ndị a nwere ike ijikwa na-ata ụdị ọ bụla nke chakoo. Taya nwekwara aka-agba na-zuru okè nkwụsịtụ mgbe ịnyịnya. Ịnya bụ fun-dị ka ogologo dị ka ala dị mfe.